Gcina isikhala ku-smartphone yakho ye-Android | Izindaba zamagajethi
Izeluleko ezine zokonga isikhala ku-smartphone yakho ye-Android
AmaVillamandos | | Android, AmaSelula
Esikhathini esingengakanani esidlule ukuba nedivayisi ephathekayo ene-8 GB yesitoreji sangaphakathi kwakuyihaba langempela futhi into abaningi abaziqhayisa ngayo. Namuhla ukuba nesitoreji esingaphansi kwama-32 GB kuvame ukufana nezinkinga ukukwazi ukugcina zonke izithombe zethu, umculo nokufaka izinhlelo zokusebenza, ezikhula ngokuya ngenani elikhulu lesikhala.
Izithombe esizithatha ngekhamera ye-smartphone yethu ziya ngokuya zinokulungiswa okuphezulu ngakho-ke zithatha indawo eningi kakhulu, izinhlelo zokusebenza sezithuthuke zaya kumkhawulo ongalindelekile kanti ezinye sezivele zinamakhulu ama-megabytes esikhaleni se-terminal yethu. Ngaphezu kwalokho, idivaysi ephathekayo ayisasebenzi nje ukushaya ucingo, futhi isebenza njengesifundi sencwadi yesidlali somculo futhi kwesinye isikhathi njengesidlali sevidiyo. Izincwadi, izingoma namavidiyo kunjalo kuthatha isikhala esiningi.
Por Uma ungomunye wabaningi abanenkinga ngokugcinwa kwangaphakathi kwe-smartphone yakho, sizokunikeza ngamathiphu ama-4 athakazelisayo ukuze ukwazi ukuwaxazulula, kepha ngokuphelele, uma ingxenye ukuze ungashintshi ama-terminals ngoba uswele isitoreji sangaphakathi.
Ngaphambi kokuqala kufanele sikutshele ukuthi awudingi ukusebenzisa amathiphu ama-4, kepha ukuthi ungakhetha ukusebenzisa owokuqala nowokugcina noma owesithathu kuphela.
1 Khulula isikhala ku-smartphone yakho
2 Sebenzisa ikhadi le-microSD
3 Hlanza ku-smartphone yakho
4 Bheka izinhlelo zokusebenza ezithatha isikhala esincane
Khulula isikhala ku-smartphone yakho
Esitolo sesicelo sedivayisi yakho yeselula nakanjani uzothola izinhlelo ezikuvumela ukuthi ukhulule isikhala ngokushesha okukhulu noma kancane., Ezinye izibonelo zingase Hlanza inkosi o I-Avira Optimizer. Lezi zinhlelo zokusebenza bazohlaziya idivayisi yethu futhi basivumele ukuba sihlanze i-cache, amafayela asalayo nokuthi azisasetshenziswa futhi izokwazi nokuthola izinhlelo zokusebenza okuthi noma sizifakile singazisebenzisi njalo noma singakaze sizisebenzise.
Ezinye izinhlelo ezifana neGalari Doctor zisivumela ukuthi sihlole zonke izithombe esinazo kwi-smartphone yethu ukuthola lezo, ngokwesibonelo, eziphindaphindwayo futhi akunangqondo ukonga izikhathi ezimbili noma ngaphezulu.
Hlanza i-Ram-Free, i-Space Clean ne-Antivirus
Umthuthukisi: Cheetah Mobile
Ukuhlanza ngeGalari Doctor
Umthuthukisi: Ama-Labs we-AVG
Sebenzisa ikhadi le-microSD
Iningi lama-smartphones emakethe livumela ukuthi kungenzeka nweba isitoreji sangaphakathi esifanayo usebenzisa ikhadi le-microSD, akhona osayizi abaningi, kepha lokho ngokujwayelekile sizowathola angama-32 noma angama-64 GB. Ekhadini lalolu hlobo singazigcina ngqo izithombe esizithathayo ukuze ukonga isikhala kube kuhle.
Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza nakwamanye amadivayisi ngokwendabuko, singashintsha izinhlelo ezithile kuleli khadi ukuze zingasebenzisi isikhala esiningi sokugcina ku-terminal.
Ngeshwa ezikhathini zakamuva abanye abakhiqizi basusa ithuba lokukhulisa isitoreji sangaphakathi ngekhadi le-MicroSD, ngenhloso yokuthengisa izindawo zokugcina ezinkulu kakhulu futhi ezibiza kakhulu. Ngenhlanhla, kuyiqiniso futhi ukuthi kuya ngokuya kube nzima ukubona amadivayisi eselula anesitoreji esingaphansi kuka-16 GB.
Lawa makhadi namuhla athengiswa cishe kunoma yisiphi isitolo noma indawo enkulu, kepha uma kwenzeka lapha sikushiya inketho yekhadi le-microSD engama-32 GB ongalithenga nge-Amazon LAPHA.
Hlanza ku-smartphone yakho
Ngezikhathi ezithile isinqumo esihle kakhulu kungaba ukwenza ukuhlanza futhi lokho kuya ngokuya kukhula njalo, ngokwesibonelo, ukufaka izinhlelo zokusebenza ngaphandle komqondo omkhulu, esingakaze sizisebenzise ngemuva kwalokho, nokuthi bahlala esikhumulweni ngendlela engenamsebenzi.
Hlala ngokuthula bese uzama ukuqeda izinhlelo noma imidlalo ongayisebenzisi, izithombe eziphuma ngokufiphele, lapho kuvela khona indawo, engenangqondo kakhulu noma leyo oyiphindaphindile. Ngaphezu kwalokho, futhi kungenzeka kakhulu ukuthi unamafayela ngezakhiwo ezahlukahlukene, ngokwesibonelo, owalande ku-imeyili futhi angasakusebenzeli.
Yebo, tQaphela kakhulu ngokuqala i-adventure yokusula izinto ongazazi kahle ukuthi ziyini, ngoba abasebenzisi abaningi bayakhuthazwa ukuthi basuse futhi bagcine ngokususa ama-elementi noma amafayela abalulekile ekusebenzeni kahle kwedivayisi yeselula. Susa kuphela lokho onesiqiniseko sokuthi awukudingi futhi lokho akunamsebenzi obalulekile.
Bheka izinhlelo zokusebenza ezithatha isikhala esincane
Uma ngabe idivayisi yakho yeselula ingenaso isitoreji sangaphakathi futhi uhlala emaphethelweni, umqondo omuhle wokonga isikhala kungaba ukubheka izinhlelo zokusebenza ezenza imisebenzi efanayo, kodwa ezithatha isikhala esincane kakhulu.
Isibonelo isiphequluli sewebhu se-Chrome singesinye seziphequluli ezihamba phambili emakethe, kodwa futhi singesinye sokudla isikhala kakhulu. Inketho enhle kungaba ukusebenzisa isiphequluli sewebhu esizosithola ku-smartphone natively noma sibheke enye into efana ne-Opera Mini futhi ezothatha isikhala esincane kakhulu. Zonke iziphequluli zisivumela ukuthi sibhekabheke inethiwekhi yamanethiwekhi, noma ngabe ezinye zisinikeza izinketho eziningi, ukuthi yebo ngemali yokubamba indawo yokugcina esingenayo.
Mayelana nalokhu, enye inketho enhle ukusebenzisa inguqulo yewebhu izinhlelo zokusebenza eziningi okufanele zonge isikhala sokugcina. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, kungaba umqondo omuhle ukusebenzisa i-Twitter noma i-Facebook kunguqulo yabo yewebhu, ngakho-ke sizokonga isikhala esiningi ngokungadingi ukufakwa kwalezi zinhlelo zokusebenza.
Lawa ngamathiphu amane nje wokonga isikhala sokugcina kudivayisi yakho yeselula, yize sazi ukuthi kunezinye eziningi. Ngalesi sizathu futhi njengoba sihlala senza, sizohlala siqondiswa ngokwazi ukuthi yini amaqhinga akho wokonga isikhala. Ungabathumela kithi ngesikhala esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Usukulungele ukuqala ukonga isikhala sokugcina ku-smartphone yakho?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izeluleko ezine zokonga isikhala ku-smartphone yakho ye-Android
Konke odinga ukukwazi nge-OnePlus 2 entsha, umbulali ophambili